10 Akanakisa Musoro Mapaki In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Akanakisa Musoro Mapaki In Europe
Nguva yekuverenga: 8 maminitsi(Last Updated On: 08/01/2021)
Imwe yezororo remhuri inonakidza iri kuenda parwendo runonakidza kune imwe yemapaki epamoyo muEurope. MuFrance chete, uchava 3 zvinoshamisa theme theme mapaki, uye isu takatora-ruoko iyo 10 akanakisa theme mapaki muEurope kune yako inotevera rwendo rwemhuri. Iyo yepasirese rollercoaster inokwira, masango enchanted, mashiripiti nyika, fairies, uye zvinokwezva zvekufamba-nguva, vakamirira iwe, kubva kuFrance kuenda kuAustria neUK.
1. Europa-Paki MuRust Germany
Iyo hombe theme paki kuGerman, Europa theme park ine zvinopfuura 100 zvinokwezva. Europa-Park ndiyo yechipiri inonyanya kufarirwa paki muEurope, mushure meDisneyland muParis. Kana vana vako vachida rollercoasters, ipapo ivo vanozoita kuputika pa 13 rollercoasters mupaki.
Kana iwe uri kuronga rwendo kuenda kuStrasbourg, saka unofanirwa kuronga kanenge 2 mazuva eEuropa-Park. This is due to the number of exciting attractions already mentioned, uye iyo yekuwedzera inonakidza inoratidza. The youngest will enjoy an enchanting elf ride, uye iyo Big-Bobby-Car dunhu revashuvi vemakwikwi emakwikwi, nepo vana vakuru nevabereki vachizoridzwa paBlue Fire Mega coaster munzvimbo yeIcelandic.
Uyezve, kana uri kunyatso kuronga kushanya kwenguva refu, ipapo unogona kugara mune imwe yemahotera epano-saiti. Nenzira iyi iwe unogona kushandisa zvakanyanya kushanya kwako kuEurope-Park, uye unzwe iwo ese themed-nzvimbo: Kubva kuAustralialand muAfrica kuenda kusango reGrimm's Enchanted.
Maitiro Ekuenda kuEuropa-Park?
Europa-Park iri pamusoro 3 Maawa kubva kuFrankfurt, uye unogona kuzviwana na chitima kufamba kuyambuka Germany kuenda kuRingsheim. ndokubva, unogona kuroja mota kana kuchinjisa bhazi.
Cologne kuFrankfurt Nechitima
Munich kuFrankfurt Nechitima
Hanover kuFrankfurt Nechitima
Hamburg kuFrankfurt Nechitima
Zvichida ndiyo inonyanya kuzivikanwa theme paki pane yedu 10 akanakisa theme mapaki mune eurongwa rweEurope, Disneyland muParis inodiwa pakati pevashanyi veese mazera. Mavara anonakidza kubva kune edu ese-nguva anodikanwa Disney nyaya, kukwezva mamirioni evashanyi gore rega rega.
Disneyland iri muguta reChessy, muFrance. Iko kumba kweWalt Disney studio uye paki yekushanya, kwaunogona kutsika mungano, uye zviroto zvako zvese zvehudiki zvinoitika. Nyika yeWalt Disney inouya kuhupenyu, mune zvinokwezva zvinoshamisa, uye inoratidza saLabyrinth yaAlice uye 4D show yaMickey.
Iwe unogona kuwedzera aya mashiripiti kupera kwevhiki kwese, uye gara kuDisney mahotera, kana mahotera emubatanidzwa ayo anongova mahara shuttle kure neDisneyland.
Maitiro Ekuenda KuDisneyland?
Disneyland ndeye chete 20 maminetsi kubva kuParis. Unogona kusvika pano wakananga kuParis airport, kana Marne-la-Vallee / Chessy chiteshi.
3. Viennese Prater theme Paki MuAustria
Prater Wien ndiyo yakanakisa theme paki muAustria, uye imwe ye 10 akanakisa theme mapaki muEurope. Mhuri yako ichave nenguva inoshamisa pane akawanda emusango rollercoasters, uye chaiwo zvinokwezva, saDr. Archibald.
Pamusoro pe, kune ngoro dzekuenda, haunted castle, uye pamusoro pazvo zvese, iyo hofori Ferris Wheel muAustria. Iri vhiri rakakura raFerris rakavhurika-gore-rese uye nderimwe Zviratidzo zvepamusoro zveVienna.
Ungasvika Sei KuVienna's Prater theme Park?
Iye Prater paki yekuvaraidza iri munharaunda yechipiri yeVienna, uye iwe unogona kusvika pairi netekisi kana pevhu kubva pakati peguta.
Sezvaungave wafungidzira, Gardaland iri pedyo neLake Garda muItari. Ipaki yemusoro iri padyo nemvura, iyo Gardaland theme paki ine zvakawanda zvinonakidza kutasva kwemvura, kunge chikepe cheColorado, uye masango rapids.
Pamusoro pe, iyo Gardaland zvakare ine hupenyu hwegungwa akwariyamu hazvo, pamusoro 13 themed nzvimbo, uye 100 mhando. Hapana fungidziro, vana vako vaizonakidzwa chose pasi pegungwa, uye haazombodi kubva.
Kwete, kana iwe uri wese nezve adrenaline, then you’d love the thrilling Blue Tornado rollercoaster.
Sei Kusvika kuGardaland Theme Park?
Unogona kutora Trenitalia chitima kubva kuVenice kuenda kuPeschiera del Garda chiteshi, uyezve shuttle kuGardaland.
Efteling theme park ndeimwe yeiyo 10 akanakisa theme mapaki muEurope. Ngano idzo isu tese takakurira pane dzinouya kuhupenyu muEfteling zvinokwezva uye enchanted dondo, kubva kuna Hans Christian Andersen kuenda kuhama Grimm.
Iyo Fata Morgana inokuendesa iwe kuFar East uye nyika dzevaSultan, nepo ma coasters emvura uye emhepo ma coasters achakutora iwe kupfuura ako akanyanya kurota. Nyika yefairies yakamirira iwe kune a chikepe tasva murima uye zvisinganzwisisike Droomvlucht.
Hapana mazwi anozokwana kurondedzera mashiripiti eEfteling theme paki yemhuri yese, saka iwe unofanirwa kungoita nguva yeiyi theme paki pazororo rako muNetherlands.
Maitiro Ekuenda KuEfteling theme Park?
Unogona kutora chitima kubva kuAmsterdam kuenda ku 's-Hertogenbosch, uyezve bhazi rakananga kuEfteling theme park.
Kana zvese zvinokwezva zvanyatsogadzirwa negoogle, ino theme park ndeimwe paradhiso yevana. Legoland theme park muWindsor yakagadzirirwa vana vakakomberedza Lego toy system.
saka, yega yega rollercoaster, igwa, uye chitima chakagadzirwa nezvidimbu zvakakura zvegoogle. Iyi inoshamisa theme park muEngland iri muBerkshire uye chete hafu yeawa kubva kuLondon.
Sei Kusvika KuLegoland Theme Park MuWindsor?
Iwe unofanirwa kutora chitima kubva kuLondon Paddington kuenda kuWindsor & Eton Central nekubatana, kana yakananga chitima kubva kuLondon Waterloo. ndokubva, kune mabhazi ekufambisa kubva kuchiteshi chimwe nechimwe chechitima kuenda kuLegoland.
7. Asterix theme paki muFrance
Kana iwe usingazive, Parc Asterix yakavakirwa pana Albert Uderzo uye Rene Goscinny's inozivikanwa comic bhuku nhevedzano, Asterix. saka, padhuze ne 2 mamirioni evashanyi vanonakidzwa nezvishamiso zvepaki huru yechipiri muFrance. Yekutanga ndeyechokwadi mashiripiti Disneyland.
MuAsterix theme paki iwe unogona kuwana iyo huru Discobelix uye uine yakanakisa inotenderera nguva, sangana nema dolphin nedzimwe mhuka kuVilla Gaulois, uye zvechokwadi unakirwe nezvimwe zvinonakidza zvinokwezva.
Maitiro Ekuenda kuPark Asterix?
Asterix theme paki ndeye chete 30 maminetsi kubva kuParis pamutsetse B paRER chitima kubva kuParis Gare du Nord. Wobva waburuka kuCharles de Gaulle 1 nhandare yendege, ndokunanga kupasipoti.
8. Futuroscope Park MuFrance
Kutamba nemarobhoti, kufamba kwenguva, uye famba kuenda ku 4 makona epasi kumusoro, Futuroscope theme park iri kunze kwenyika ino. Iyi inoshamisa theme theme iri munzvimbo yakanaka yeNouvelle-Aquitaine mudunhu reFrance.
Futuroscope inosanganisa zvinokwezva zvekunzwa nesainzi uye ichave inonakidza uye ruzivo rwekudzidzisa kumhuri yese.
Maitiro Ekuenda KuFuturoscope theme Park?
Unogona kusvika kune inoshamisa Futuroscope theme paki neEurostar kuenda kuLille kana Paris, uye shandura kuTGV.
9. Chessington World Of Adventures theme Park MuUK
Chessington World of Adventures muUK ipaki-themed park. Izvi zvinoreva kuti chero mhuri inoshanya kuChessington paki yekunakidzwa inoshanduka kuita mutambo wemhuri kune nyika isinganzwisisike uye inonakidza yemhuka dzesango uye mu Africa yese..
Pamusoro pezviitiko zvemusango, unogona kunakidzwa nekugara muSafari neAzteca themed hotera, uye wedzera kugara kwako. saka, kana iwe uri mukushanya kusango, iwe unenge uine inoshamisa nguva kuyambuka paki musango rangers, Tiger dombo, uye rwizi rwizi.
Chessington nyika yezvakaitika yakagadzirirwa mhuri inoshamisira, uye unosungirwa kuve nenguva yehupenyu hwako.
Sei Kusvika Kune Chessington World Of Adventures?
Chessington yemusango theme paki iri 35 maminetsi kubva pakati peLondon nechitima. saka, unogona kutora South-Western njanji kubva kuWaterloo kuenda kuChessington South chiteshi.
10. Fantasialand theme Park MuGerman
MuFantasialand zvese zvevana 'zvekufungidzira zvinoitika mukati 6 nyika dzinoyevedza. Munyika dzese, unogona kunakidzwa akatasva anonakidza, uye zvinoonekwa zvechiedza uye neruvara.
saka, chii chinoita kuti Fantasialand imwe yeakanakisa theme mapaki muEurope? China Town, Mekisiko, Africa, Berlin, Guta reWuze, chakavanzika umambo, uye Rookburgh, nekukwezva kunoshamisa munyika dzese. Kubva kuBlack Mamba kuenda kune inozivikanwa Taron, kuchovha uku kuchakupeperesa.
Maitiro Ekuenda Kune Anoshamisa?
Unogona kutora shuttle kubva kuBruhl chiteshi chechitima. Fantasialand iri muBruhl, ingori 2o maminetsi kubva kuCologne.
Kupeta izvi zvinonakidza kumusoro, Mifungo inopenya yeEuropean yakagadzira inoshamisa zvikuru misoro yemapaki munyika. Kunyangwe iwe uri kufamba nevacheche kana kutora vana vakura kune chiitiko, ari 10 akanakisa theme mapaki pane edu runyorwa ane akanakisa zvinokwezva zvemazera ese.
pano paSave A Chitima, tichafara kukubatsira kuronga rwendo rwako kuenda ku “10 Akanakisa Musoro Mapaki In Europe”.
Iwe unoda kusimbisa yedu blog positi "10 Yakanyanya Musoro Mapaki MuEurope" kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-theme-parks-europe%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)